कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा » बुद्ध भूमि नेपाल
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
काठमाडाैं, १९ माघ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । केहीबेरअघि सम्पन्न बोर्ड बैठकको निर्णयपछि नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो ।
यसअघि आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले सोमबार बिहान नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रकाशित नतिजा अनुसार १ जनाको रद्द भएको छ भने ११ हजार ४ सय ९० जनाको स्थगित भएको छ । कोरोना महामारीबीच ४ लाख ३२ हजार ५ सय परीक्षार्थी सहभागी थिए ।
वैशाख/जेठमा नै लिइने कक्षा १२ को परीक्षा कोरोना महामारीका कारण मंसिरमा मात्रै सञ्चालन गरिएको थियो । कक्षा १२ को परीक्षा गत मंसिर ९ देखि १६ गतेसम्म सञ्‍चालन भएको थियो । संक्षिप्त परीक्षाको प्राप्तांक शिक्षकले जथाभावी पठाएपछि नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको थियो ।
बोर्डले कुल पूर्णाङ्कमध्ये ४० प्रतिशतको संक्षिप्त परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । चाँडो नतिजा प्रकाशित गर्न विद्यालयमै विषय शिक्षकले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेका थिए । विद्यार्थीको प्राप्तांक बोर्डको प्रदेश कार्यालयहरूबाटै नजिता प्रकाशनको सिस्टममा इन्ट्री गराउने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
अब विद्यार्थीलाई बोर्डले नै ग्रेडसिटलगायतको प्रमाणपत्र दिनेछ । कक्षा १२ को नतिजामा ढिलाइ भए पनि विश्वविद्यालयहरूले स्नातक तहमा भर्ना खोलिसकेका छन् ।
२०७५ सालदेखि कक्षा १२ को नतिजा ग्रेडिङ पद्धतिका आधारमा हुँदै आएको छ ।
यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
नतिजा हेर्नको लागि एनटीसी सिमबाट १६०० मा डायल गरेर नतिजा हेर्न सकिने छ । नेपाल टेलिकमको १६०० मा एसेमेस गरेर पनि नजित हेर्न सकिन्छ । त्यसको लागि NEB एक स्पेस आफ्नो सिम्बल नम्बर टाइप गरी १६०० मा एसेमेस पठाउनु पर्ने छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल टेलिकमको वेवसाइटबाट पनि नतिजा हेर्न सकिने छ । Source:news24nepal
बधाई छ : सुम्निमाले कक्षा १२ को परीक्षामा गरिन् ‘नेपाल टप’ !
२० माघ २०७७, मंगलवार १५:३९
ट्याक्सी चालककी छोरी १०० रूपैयाँ तिरेर पढेकी अस्मिता संसारकै महँगो कलेजमा पढ्न स्विट्जरल्यान्ड
२९ पुष २०७७, बुधबार २०:०६
चटपट बेचेर इञ्जिनियरिङ पढ्दै सचिन
२२ पुष २०७७, बुधबार २२:२१
सिमकोटमा दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ भएपछी एसइई दिने बिद्यार्थी मारमा
१९ पुष २०७७, आईतवार ०९:२३
यी हुन् जाडोयाममा सुन्तला खानुको १० फाइदा
२८ मंसिर २०७७, आईतवार १९:४२
बधाई ! समता स्कुलकी अस्मिताले पाइन स्वीजरल्यान्डमा दुई करोड बराबरको छात्रवृत्ति
२४ मंसिर २०७७, बुधबार २०:२८